Vaovao - Karazana sisin'ny vera 5 mahazatra
Ny fitaovana fitaratra dia afaka mahazo karazana fitsaboana amin'ny endriny maro isan-karazany, izay samy hisy fiantraikany manokana amin'ny fiasa ankapobeny sy ny fahombiazan'ny sombin-javatra vita. Ny fanodinana dia afaka manatsara ny fiarovana, ny hatsarana, ny fiasa ary ny fahadiovana ary manatsara ny fandeferana amin'ny lafiny ary manampy amin'ny fisorohana ny fikikisana.
Etsy ambany, hizaha karazana sisin'ny vera dimy mahazatra sy ireo tombony manokana ananany.
Hetezo sy hikosoka na sisin-dranomasina
Antsoina koa hoe seams azo antoka na sisiny voahosotra, ity karazan-vera ity - izay fehikibo fasika hampiasana moramora ny sisiny maranitra - no ampiasaina voalohany indrindra mba hiantohana ny ampahany vita soa aman-tsara. Ity fomba fanodinana volom-borona ity dia tsy manome sisin-dambolambo vita kanto ary tsy ampiasaina amin'ny haingon-trano; noho izany, ity fomba ity dia mety indrindra amin'ny rindranasa izay tsy aharihary ny sisin'ny takelaka fitaratra, toy ny fitaratra napetraka ao anatin'ny vatan'ny varavaran'ny fatana.
Ity karazan-javamaniry ity dia misy sisin'ny fitaratra fitotoam-bary mandra-pahatonga azy ireo malama ary avy eo mihazakazaka ny sisiny ambony sy ambany manaraka ny fehikibo mba hamongorana ny maranitra sy hanesorana ireo puce. Ny sombin-kazo fitaratra vokarina dia manasongadina ny tampon'ny chamfer ambony sy ny ambany miaraka amin'ny sisin'ny tany ivelany. Hita miaraka amina vorombola mahitsy na miolikolika, ny sisin'ny chamfered dia matetika hita eo amin'ny fitaratra tsy misy rafitra, toy ireo eo amin'ny valizy fanafody.
Fitotoana pensilihazo, azo tamin'ny alàlan'ny fampiasana kodiarana fikosoham-bolo, napetraka mba hamoronana sisiny somary boribory ary ahafahana mamarana vera, satin na vera matte. Ny "pensilihazo" dia manondro ny tadin'ny sisiny, izay mitovy amin'ny pensilihazo na endrika C. Ity fikosoham-bary ity dia antsoina ihany koa ho Edge-Polished Edge.
Ny sisin'ny vera vita amin'ny pensily dia milamina tsara, vitaina amin'ny famirapiratany mamirapiratra, ary misy fiolahana kely. Ny farany tsy manam-paharoa dia mahatonga ny pensilihazo pensilihazo tsara ho an'ny fampiharana estetika mifantoka amin'ny estetika. Toy ny sisin'ny tany pensilihazo, ny tadin'ny vodin-tany dia mitovy amin'ny endrika pensilihazo na C.
Ity fomba ity dia mitaky fanapahana ny sisin'ny vera ary avy eo polesina fisaka, vokatr'izany dia miseho miloko sy mamirapiratra na manjelanjelatra. Ny ankamaroan'ny rindran-damina vita amin'ny fisaka koa dia mampiasa sakamalaho kely 45 ° amin'ny sisiny fitaratra ambony sy ambany mba hanesorana ny maranitra sy "chatter" izay azo amolahana ihany koa.